गुल्मीका दिदी भाईबीच फेसवुक मार्फत बस्यो माया: युवतीको रहस्यमय निधन, प्रेम कहानी सुरु देखि अन्त्य सम्मको नालिबेली (भिडियो सहित हेर्नुस्) – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /Video/गुल्मीका दिदी भाईबीच फेसवुक मार्फत बस्यो माया: युवतीको रहस्यमय निधन, प्रेम कहानी सुरु देखि अन्त्य सम्मको नालिबेली (भिडियो सहित हेर्नुस्)
काठमाडौं । हामीले सामाजिक सञ्जाल र अन्तराष्ट्रिय समाचारमा कहिले काँही नचिनेरै दाजुवहिनी र आफन्तमै प्रेम र विवाह भएका विषय सुन्ने गरेका छौं । तर यहाँ भने गुल्मीमा भएको त्यस्तै समाचार र भिडियो प्रस्ततु गरिएको छ । युवक वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा थिए ।
मदानी गाउँपालिका ४ काभ्रेगाउँकी २३ वर्षकी मिना कुँवरले फेसवुकमा निकै मार्मीक स्टाटस लेखेकी थिइन् । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएर विदेशीएका दाजु भारतमै हराए । उनको पनि खबर छैन ।
उनले आफु घर जाँदा मिनालाई पनि लिएर जाने बताउँछन् । अनिल कुँवर विदेशवाट आएर मिनालाई पनि लिएर उनी कावासेती स्थित आफ्नो दिदीकोमा जान्छन् । कावासेती पुगेका उनीहरु फुलवारीमा घुम्न जान्छन् तस्बिर खिच्छन् । अनि अर्को दिन आफ्नो गाउँ गुल्मी जान्छन् ।
नयाँ वर्ष संगै मनाएका मिना र अनिललाई जंगलमा संगै बसेको देख्नेहरु पनि छन् । तर भोलीपल्ट सम्म पनि मिना आफ्नो घर फर्किन्निन् । खोजि हुँदा उनको श व भिरमा ल डे को अवस्थाा देखिन्छ । उनको निधन कसरी भयो अहिले यो अनुसन्धानका क्रममा छ ।
दिदी भाई नाता पर्नेबीचमा भएको यो प्रेमले मिनाले ज्यान गुमाएकी छन् । अनिलको आमाले उनीहरुको बिचमा सम्बन्ध भएको थाहा पाए पनि समाजमा वेइज्जत हुने डरले घरका अरु सदस्यलाई पनि सुनाउँदिनन् । आफैले दुवै जनालाई आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्न सुझाव दिन्छिन् । तर यसै बिचमा मिनाको रहस्यमय निधन हुन्छ ।
काठमाडौं आउँदै गरेको बसभित्र चाँजगर्दा प्रहरीले जे देख्यो, सबैको होस् उडायो ! (भिडियो हेर्नुस)
चितवन घटनामा फेरी लफडा: प्रमिलालाइ फोनमै थर्काइन सुरेश परियार को श्रीमती सरिताले, मेरो श्रीमानलाइ मात्र थुन्ने किन ? (भिडियो हेर्नुस्)
करण र रोजुको मुख्य भूमिका तयार भएको ‘प्रिय तिमी…’ बोलको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक (भिडियो सहित्)